Nkọwapụta nka na ụzụ nke Marmaray | RayHaber
[06 / 12 / 2019] Kardemir ezute ndị lara ezumike nká	78 Karabuk
[06 / 12 / 2019] Cagbọ njem Kocaeli Dị Mbara maka Oge Ugbo	41 Kocaeli
[06 / 12 / 2019] Njikwa PC Njikwa Ulo oru na Sistemụ nleba Anya ilgbọ njem	34 Istanbul
[06 / 12 / 2019] EN50155 na E-Mark Computers Computers maka Transportgbọ njem ọgụgụ isi	34 Istanbul
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulNkọwapụta Teknụzụ Marmaray
08 / 11 / 2019 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey, VIDEO
njiri mara marmaray
• 13.500 n'ogologo zuru ezu, nke mejupụtara 27000 m, nke ọ bụla nwere ahịrị abụọ.
• A na-eji ọwara agbatị na ọwara emikpu na ahịrị ogologo xNUMX mikpuru mmiri bụ 1 m, ahịrị ogologo 1386.999 immersion bụ 2 m.
• A na-enye ntinye nke ọwara mmiri n'ọdọ mmiri n'akụkụ Eshia na Europe site na ọdọ mmiri.
• zọ ahụ bụ okporo ụzọ na - enweghị mmerụ dị n'ime ọwara mmiri ma bụrụkwa okporo ụzọ gboo gboo dinyere n'ọwara.
• razọ ndị e jiri rụọ ọrụ bụ UIC 60 na agịrị olu siri ike.
• Ihe eji ejikọta ya bụ ụdị HM, nke bụ ụdị na-agbanwe agbanwe.
A na-eji eriri ogologo xNUMX m mee ogologo welded.
• Ejiri LVT mee ihe n'ọwara.
• A na-arụzi usoro okporo ụzọ Marmaray site na igwe ọgbara ọhụrụ site na ọrụ anyị na-enweghị nkwụsị ọ bụla n’usoro nke akwụkwọ ntuziaka mmezi nke TCDD yana usoro mmezi nke ụlọ ọrụ ndị na-emepụta na akwadoro na usoro EN na UIC.
• A na-enyocha nyocha nke eriri ahụ kwa ụbọchị, a na-enyochakwa nyocha ultrasonic nke eriri ndị ahụ kwa ọnwa na igwe nwere oke mmetụta.
• A na-achịkwa nchịkwa na mmezi nke ọwara otu ụkpụrụ.
• A na-arụ ọrụ mmezi ya na Onye njikwa 1, Onye Nlekọta Mmezi na Mmezi nke 1, Injinia 4, 3 na-elekọta na ndị ọrụ 12 na Malọ Ọrụ Mmezi na Ndozi nke ụlọ Marmaray.
Mpaghara Metro Na-adịghị Elu Ogologo 63 km
- Onu ogugu nke ebughari n’elu ala 37 Pieces
Mkpokọta Ogologo Ogologo Ọgbọ okporo Razọ Ọdọ 13,6km
- Ogologo olulu mmiri 9,8 km
- Ogologo Ngwurugwu Tube 1,4km
- Mepee - Mechie Ogologo Osimiri 2,4 km
- Number nke n'okpuruala ala 3 iberibe
Ogologo Oge 225m (opekempe)
Ọnụ ọgụgụ ndị njem nọ n'otu ụzọ 75.000 njem / oge / otu ụzọ
Oke Oke 18
Ọzụ ahịa 45 km / h
Ọnụ ọgụgụ nke usoro ihe ọmụmụ 2-10 nkeji
Ọnụ ọgụgụ nke ụgbọ ala 440 (2015 afọ)
E nwere ọtụtụ ihe mepụtara n'ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ mmiri. A na-adọrọ ihe ndị ahụ na saịtị ahụ, mikpuru n'ime ọwa ma jikọọ iji mepụta ọnọdụ ikpeazụ nke ọwara.
N'ọnọdụ dị n'okpuru, ihe mmewere na-ebu mmiri catamaran docking gaa ebe gbara ọchịchịrị. (Osimiri Tama na Japan)
Foto dị n'elu ahụ na-egosi envelopes ígwè ígwè dị n'elu nke a na-arụpụta n'ime ụgbọ mmiri. A na-ewepụta tubes ndị a dị ka ụgbọ mmiri ma kwaga na saịtị ebe a ga-ejupụta ma mechaa ihe ahụ (dị n'elu) [Osimiri Osaka Osimiri Japan (tinyere okporo ụzọ na okporo ụzọ) Osisi] (Kobe Port Minatojima Tunnel na Japan).
n'elu; Kawasaki Harbour Harl na Japan. nri; Osimiri Harbour Osaka Harbour na Japan. A na-emechi ngwụsị abụọ nke ihe ndị ahụ site na nkeji nkebi; ya mere, mgbe a na-ahapụ mmiri na ọdọ mmiri eji rụọ ọrụ ndị ahụ na mmiri, a ga-ahapụ ihe ndị a ka ha na-ese n'elu mmiri. (Foto ndị e wepụtara site na akwụkwọ nke Association of Japanese Engineering and Reclamation Engineers bipụtara.)
Ogologo mmiri ọ mikpuru n'akụkụ Osimiri Bosporus dị ihe dị ka 1.4 kilomita, gụnyere njikọ dị n'etiti ọwara mmiri ahụ na-esite na mmiri. Ọwara bụ njikọ dị mkpa n'okporo ụzọ abụọ nke na-agafe n'okpuru Bosphorus; Ọwara a dị n'etiti mpaghara Eminönü n'akụkụ Europe nke Istanbul na Üsküdar district n'akụkụ Eshia. Lineszọ okporo ụzọ abụọ ahụ na-agbatị n'otu ihe ahụ ekike ala ma ọ bụrụ na e kewapụrụ onwe ha site na mgbidi nkewa.
N'ime iri afọ nke iri abụọ, e wuola ihe karịrị otu narị narị mmiri e ji wuo ya maka okporo ụzọ ma ọ bụ okporo ígwè na-agagharị n'ụwa nile. Ejiri akụkụ ndị na-ekpuchi mmiri na-ekpuchi ndị na-ekpuchi mmiri ma na-ekpuchi ha n'osisi a na-emeghe ma jiri kpuchie ihe mkpuchi. Ala ndị a aghaghị inwe oke dị irè iji gbochie ha igwu mmiri ọzọ mgbe ha tinyechara ya.
A na-esi n'okpukpu mpempe mmiri kpoo mmiri na-ekpuchi ya. ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a bụ 100 ogologo oge m, ma na njedebe nke olulu mmiri ahụ, ihe ndị a jikọtara ma jikọta ya n'okpuru mmiri ka ọ bụrụ ebe ikuku. Onye ọ bụla n'ime ha nwere ihe mgbatị na-etinye na nwa oge na njedebe; ihe ndị a na-ekwe ka ihe dị iche iche na-ese n'elu mmiri. Usoro mmepụta ihe agwụla na akọrọ mmiri akọrọ, ma ọ bụ ihe ndị a na-ebute n'ime oké osimiri dị ka ụgbọ mmiri ma mepụta n'akụkụ akụkụ mmiri na-aga n'akụkụ ebe mgbakọ ikpeazụ ahụ.
A na-adọta ihe ndị ahụ mikpuru n'ime mmiri ahụ ma mechaa ya n'ime ebe ọkpọkọ ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ mmiri na-adọta ha n'ebe a; mikpuru n'ime ọwa ma jikọta iji mepụta ọnọdụ ikpeazụ nke ọwara. N'aka ekpe: A na-adọga mmewere ahụ gaa ebe a ga-arụ ọrụ nzukọ ikpeazụ maka imikpu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri.
Enwere ike ịdọrọ ihe ndị dị n’ime ọwara mmiri gafere nke ọma. Mgbe emechara akụrụngwa akụrụngwa ahụ na Tuzla, ihe ndị a ka etinyere na cranes na bekee ndị a rụrụ n'ụzọ pụrụ iche iji mee ka mbelata ihe ndị dị na ọwa mmiri n'akụkụ mmiri ahụ. Emechaa, ihe ndị ahụ wee banye, na-enye oke ibu achọrọ maka iwetulata ya na ịsachasị.
Ibe ihe mmemme bu ihe na-ewe oge ma di nkpa. Na eserese dị n’elu, egosiri ihe a na-emikpu n’ime ala. A na-achịkwa ihe ndị a n'ụzọ dị larịị site na arịlịka na sistemụ eriri igwe na cranes na mkpọda mkpọda ahụ na-ejikwa ọnọdụ kwụ ọtọ ruo mgbe a ga-akwada ihe ma dokwasị ya kpamkpam. Na foto dị n'okpuru, GPS nwere ike nyochaa ọnọdụ nke mmewere ahụ mgbe a na-eme baptism. (Foto ndị e sere n'akwụkwọ ahụ nke ndị Japan Association of Screening and Breeding Engineers bipụtara.)
A na-achịkọta ihe ndị mikpuru n’ime njedebe na njedebe ikpeazụ na ihe ndị bu ụzọ; mgbe nke a gasịrị, mmiri dị n ’njikọ njikọ dị n’etiti ihe ndị ejikọtara ejikọtara na mmiri. N'ihi nsonaazụ nke mmiri ahụ, mgbali mmiri nke dị na nsọtụ ọzọ nke mmewere ahụ na-etinye eriri afọ roba ka gasket na-egbochi mmiri. Ejiri ihe nkwado nwa oge ka edobere ọnọdụ ebe ntọala zuru ihe ndị ahụ mechara. Emechara ọwa ahụ wee gbakwunye akwa mkpuchi achọrọ. Mgbe etinyere eriri ngwụcha ngwụcha tube ahụ, ọnụ ụzọ njikọ nke mkpọpu mmiri na ọwara tube jupụtara na ihe ndị na-enye mmiri. A na-eji Machines (TBMs) ọwara mmiri na-abanye n'ime ọwara ruo mgbe mmiri ruru.
Ejiri azu azu kpuchie elu nke oghere ahu. Ihe atụ atọ a gosipụtara afọ ojuju sitere na ụdọ agba nke nwere aka abụọ na-eji usoro tremi. (Foto ndị e sere n'akwụkwọ ahụ nke ndị Japan Association of Screening and Breeding Injin) bipụtara.
N’ime mmiri mikpuru n’okpuru ukpa ahụ, enwere otu ime ụlọ nwere ọnụ ụlọ abụọ, nke ọ bụla na-aga ịnya ụgbọ oloko. A na-etinye ihe ndị ahụ kpamkpam na seabed nke mere na mgbe ọrụ ahụ rụchara, profaịlụ seabed bụ otu ihe profaịlụ seabed tupu ịmalite ọrụ ahụ.
Otu uru dị na ọwara mmiri a mikpuru bụ na aga-eme akụkụ akụkụ nke ọwara ka emebere nke ọma maka ọwara mmiri ọ bụla. N’uzo a, inwere ike ihu uzo ihe di iche na-eme gburugburu uwa na foto di n’elu. A rụrụ ọdọ mmiri ndị ahụ n'ụdị nke ihe dị iche iche siri ike, nke, na ọkọlọtọ, nwere ma ọ bụ na-enweghị paịlị nchara nchara ma ọ bụ nke na-arụkọ ọrụ na ihe ndị dị n'ime. N’aka nke ọzọ, etinyerela usoro iji eme ihe ọhụrụ na Japan kemgbe afọ iri iteghete, na-eji mmechi na-abụghị nke siri ike ma sie ike site na sandwiching n'etiti envelopu nke dị n’ime na nke mpụga; ndị a concretised nhazi n'ụzọ zuru oke. Enwere ike itinye usoro a site na mmepe nke ezigbo mmiri dị mma ma nwee kompeni. Canzọ a nwere ike iwepu ihe ndị metụtara nhazi na imepụta ihe mgbochi na ihe eji akpụzi ígwè, na ogologo oge, site na inye nchebe zuru oke maka envelopu nchara, a ga-ewepụ nsogbu nsogbu.
ILR AND MARA NA TUBE TUNEEL
Tungbọ mmiri n'okpuru Istanbul nwere ngwakọta nke ụzọ dị iche iche.
Akụkụ ọbara ọbara nke ụzọ ahụ nwere ọwara mmiri, ebe akụkụ ndị ọcha na-abụkarị nke a na-arụ n'okirikiri mmiri site na iji ọwara mmiri (TBM), a na-ejikwa akụkụ odo na-emepe site na iji Usoro Mmepe (C&C) na New Austrian Tunneling Method (NATM) ma ọ bụ usoro ọdịnala ndị ọzọ. . Onu ogugu a gosiputara Tunnel Boring Machines (TBM) nke nwere onu ogugu 1,2,3,4 na 5.
Ejikọtara ọwa mmiri n'okirikiri site na iji igwe ọwara mmiri (TBMs) na ọwara mmiri. E nwere ndagwurugwu nke ọ bụla na ụzọ okporo ụzọ dị n'akụkụ ọwara ndị a. Ekere ọwa mmiri n’etiti ibe ha zuru oke iji gbochie ha imetụta ibe ha nke ukwuu. Iji nye ohere nke ụzọ mgbapụ n'ọwara nke yiri ihe mberede, emebeala ọwara njikọ obere oge.
Ọkpụkpụ n'okpuru obodo na-ejikọ onwe ha na mita 200 ọ bụla; yabụ, enyere ya na ndị ọrụ ọrụ nwere ike isi n'ụzọ ọ bụla gafere n'ụzọ ọ bụla. Na mgbakwunye, na ihe ọghọm n'okporo ụzọ ọ bụla na-egwu mmanụ, njikọ ndị a ga-eme ka ụzọ mgbapụta dị mma ma mee ka ndị ọrụ nnapụta nwee ohere.
N'ime igwe na-agwụ ike (TBM), a hụwo mmepe na 20-30 afọ ikpeazụ. Ihe atụ ahụ na-egosiputa ihe atụ nke igwe igwe nke oge a. Ogo nke ọta nwere ike karịa mita 15 na usoro ndị dị ugbu a.
Nrụọrụ nke igwe eji egbu mmiri n'oge a nwere ike ịdị mgbagwoju anya. Foto a na-eji igwe nwere ihu atọ, nke a na-eji na Japan, mepee ọwara ụdị oval. Enwere ike iji usoro a rụọ ọrụ ebe ọ dị mkpa iji wuo ebe ikpo okwu, mana ọ dịghị mkpa.
N'ebe ngalaba nke ọwara agbanweela, ọtụtụ usoro ọrụ pụrụiche, yana ụzọ ndị ọzọ, ka etinyere n'ọrụ (New Austrian Tunneling Method (NATM), na-akụ ọkụ na igwe na-emeghe gallery). Ejiri usoro ndị yiri ya mee ihe mgbe a na-egwu olulu Sirkeci, bụ nke edoziri n'usoro nnukwu ma dịkwa omimi mepere n'okpuruala. Ejiri uzo uzo abuo mepere uzo abuo; Stationslọ ndị a dị na Yenikapı na Üsküdar. Ebe a na-eji ọwa mmiri mepere emepe, a na-arụ ọwa mmiri a ka ọ bụrụ naanị otu igbe obe na-ejikọ mgbidi dị n'etiti etiti ahịrị abụọ ahụ.
N’ọdọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri niile, etinyere mmiri na ikuku na ikuku iji gbochie mmiri iyi. Maka ọdụ ụgbọ oloko nke ime ime obodo, a ga-eji usoro iwu yiri nke a na-eji na ọdụ ụgbọ ala okpuru ala. Foto ndị na-esonụ na-egosi ọwara mmiri nke usoro NATM wuru.
N'ebe achọrọ eriri eji ehi ụra ma ọ bụ ahịrị nkwonkwo n'akụkụ, a na-etinye ụzọ dị iche iche site na ijikọta. N'ime oghere a, a na-eji usoro TBM na usoro NATM emekọ ihe.
NKWU NA NKWA
E jiri ụgbọ mmiri ndị e gwupụtara na bọket iji mee ụfọdụ n'ime ihe ndị na-egwu mmiri na nke dị omimi maka ọwara mmiri.
Enyere Ọdọ Mmiri Baịshọnik a rụrụ n'elu Osimiri Bosphorus. Ya mere, emeghere ọwa n ’ala oke osimiri nke zuru oke iji nabata akụkụ ụlọ ahụ; Ọzọkwa, a na-arụ ọwa a n'ụzọ nwere ike itinye akwa mkpuchi na mkpuchi nchebe n'Ọwara.
E ji olulu mmiri na mmiri mebiri emebi nke dị n'okpuru ala na mmiri ndị dị n'okpuru ala. Ọnụ ego ala dị nro, aja, gravel na nkume amịpụtara agafegoro ọnụ karịa 1,000,000 m3.
Ebe omimi kachasị nke ụzọ ahụ niile dị na Bosphorus ma nwee omimi nke ihe dịka mita 44. Igwe na-emikpu n'ime mmiri A na-etinye akwa nchekwa nke opekata mpe 2 n'ọdọ mmiri ahụ, akụkụ akụkụ nke akpa ahụ dị ihe dịka mita 9. Ya mere, omimi dredger na-aru oru di ihe dika 58 mita.
E nwere obere igwe dị iche iche ga-eme ihe a. Ejiri Dredger Dugger na Tug Bucket Dredger maka ọrụ nyocha.
The Grab Bucket Dredger bụ ụgbọala dị arọ nke na-etinye ya n'ọdụ ụgbọ mmiri. Dị ka aha ụgbọala a na-atụ aro, o nwere bọket abụọ ma ọ bụ karịa. Bọketị ndị a bụ bọket ndị na-emeghe mgbe a na-esite na nkwụsị ngwaọrụ ahụ ma kwụpụ ya site na mmiri ahụ ma kwụsịtụrụ. Ebe ọ bụ na bọket dị oke arọ, ha dabara n'oké osimiri. Mgbe ebuliri ịwụ site na ala nke oké osimiri ahụ, ọ na-ekpuchi na-akpaghị aka, nke mere na a na-ebugharị ngwá ọrụ ahụ n'elu ma bubata ya n'ụgbọ mmiri site na bọket.
Ndị na-atụchasị bọket kachasị ike nwere ike ịkọ ihe dịka 25 m3 n'otu usoro ọrụ. Ojiji nke ijide bọket bụ ihe bara uru na ihe dị nro na ihe siri ike na-enweghị ike iji ya rụọ ọrụ dị ike dịka nkume na nkume. Ịkwanye ịwụ ịwụ bụ otu n'ime ụdị dredger kasị ochie; Otú ọ dị, a ka na-ejikarị ha eme ihe n'ụwa nile maka ịkọcha mmiri na ịdọrọ ọnụ.
Ọ bụrụ na a ga-enyocha ala e metọrọ emetọ, a pụrụ iji akpa rọba pụrụ iche na bọket ndị ahụ. Akara ndị a na-egbochi mwepụta nke mkpokọ mmiri na nke ọma n'ime kọlụm mmiri n'oge ịdọpụta bọket ahụ site na ala nke oke osimiri ma ọ bụ hụ na enwere ike idobe ego nke bekee na oke oke.
Uru nke bọket a bụ na ọ tụkwasịrị obi ma nwee ike igwu ala ma gbue ala n’ebe dị omimi. Ihe ọghọm ya bụ na ọnụ ọgụgụ olulu mmiri ahụ na-agbadata nke ukwuu ka omimi ahụ na-abawanye, ma na ugbu a na Bosphorus ga-emetụta izi ezi na arụmọrụ n'ozuzu ya. Na mgbakwunye, enweghị ike ịme ihe na nyocha iji ngwaọrụ siri ike na ụmụ oke.
Dredger bọket Dredger bụ arịa pụrụ iche nke ejiri ụdị ụdị dredging na-egbutu ma na-egbutu ya na ọkpọ ya. Mgbe ụgbọ ahụ na-aga n'okporo ụzọ, a na-esite ala mmiri agwakọta site na mmiri nke oke osimiri ahụ. Ọ dị mkpa ka ndị a gbanyere n’ime ya banye n’ime ụgbọ. Iji mejupụta arịa dị oke ike, a gharịrị ijide n'aka na nnukwu mmiri mmiri ihe nwere ike isi na ya pụọ ​​mgbe ụgbọ ahụ na-aga. Mgbe ụgbọ ahụ jujuru, ọ na-aga ebe a na-ekpofu ahịhịa wee kpofuo nsị; thengbọ ahụ dị njikere maka usoro ọrụ ọzọ.
Dredger Bucket kachasị dị ike nwere ike ijide ihe dịka 40,000 tonnes (ihe dịka 17,000 m3) nke ihe ọ bụla n'otu usoro ọrụ ma nwee ike igwu na nyochaa ihe dị ka mita 70. Dredger Bucket Dredgers nwere ike ịmalite ma gbasie ike na ihe dị nro.
Uru nke Dredger Bucket Dredger; ikike dị elu na usoro mkpanaka anaghị adabere na usoro ntọala. Ọghọm; na ezighi ezi na ngbachapu na ihe ndi a n'osimiri ndi di nso n'osimiri.
N'ime mmiri njikọ nke ọdụ mmiri ahụ mikpuru, a gwupụtara ụfọdụ okwute ma mịdaa n'akụkụ ikpere mmiri. Havezọ abụọ dị iche iche esoro maka usoro a. Otu n’ime ụzọ ndị a bụ itinye usoro ọkọlọtọ nke mmiri na-egbu mmiri na mmiri ọkụ; ụzọ ọzọ bụ ojiji nke ngwa igwe ọpụpụ pụrụ iche, nke na-enye ohere ka nkume gbawaa n’enweghi oria. Methodszọ abụọ a dị nwayọ ma dịkwa ọnụ.
Mpempe ingbọ okporo Ọsọ Dị Elu na Njirimara - CAF HT65000
Nkwụsị ọrụ nkwụsịtụ dị na Marmaray! Utu ala laghachiri na ihe di nma
Ọzụzụ nka na ụzụ na-aga n’ihu na Samulaş
General Electric, nwanyị nwanyị 2020 ruo mgbe 20.000…
Atatürk Vocational and Technical Anatolian High School…
Nkà na ụzụ si na TCDD gaa na okporo ụzọ okporo ụzọ Moroccan
Nzukọ Nzuzo maka Trabzon Light Rail System Project
Nleba anya n’ahịa: Expchụpụ ụlọ na ọrụ ụlọ
Kartepe na Uludağ n'otu square
Okporo ụzọ ndị dị n'obodo Korfez na-eme nkasi obi na Kocaeli
Kardemir ezute ndị lara ezumike nká
Cagbọ njem Kocaeli Dị Mbara maka Oge Ugbo
Njikwa PC Njikwa Ulo oru na Sistemụ nleba Anya ilgbọ njem
EN50155 na E-Mark Computers Computers maka Transportgbọ njem ọgụgụ isi